Tonga ao Trieste ny World March - The World March
Home » About us » Tsindrio ny Notes » Tonga ao Trieste ny World March
Taorian'ny nandalovany an'i Koper-Capodistria, ny 26 Febroary, tonga tany Italia ny 2 martsa faha-XNUMX ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fahatsiarovana.
Rehefa avy nandalo ny tanànan'i Koper-Capodistria, tao Slovenia, ny 26 febroary dia tonga teto Italia ny Diabe faharoa ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriam-pahalemana.
Ny fandaharan'ny fandalovan'ny volana martsa tao amin'ny faritry Trieste dia nihena be noho ny baiko navoaka ho an'ny vonjy maika amin'ny coronavirus: toy ny tany Umag (Kroasia) sy Piran (Slovenia) dia tsy azo atao ny mihaona amin'ny mpianatra Muggia sy Trieste (izany Ankizy 500 no niandry tao amin'ny Aula Magna ao amin'ny Oniversite Trieste) ary nisy ny fihaonambem-bahoaka izay nofoanana izay iadian-kevitra momba ny ady amin'ny siokleary sy ny safidy etika hisian'ny fandriampahalemana.
Tamin'ny maraina, ny ekipam-bozaka dia noraisina manokana tao amin'ny filankevitry ny tanànan'i Muggia nataon'ny ben'ny tanànan'i Muggia Laura Marzi, avy eo dia nifindra tany amin'ny tanànan'i Dolina-San Dorligo della Valle ny delegasiona izay nahazoana azy (natokana ho azy indray) ) avy amin'ny minisitry ny tontolo iainana, ny faritany, ny fanajariana ny tanàn-dehibe ary ny fitaterana Davide Þtokovac.
Avy eo dia nifindra tany amin'ny zaridainan'i San Giovanni (hopitaly aretin-tsaina taloha, avy eo misokatra amin'ny tanàna), izay, tamin'ny lanonana tsy miankina iray manoloana ny kako Nagasaki, Alessandro Capuzzo, ao amin'ny komity mpikarakara eo an-toerana, dia nahatsiaro ny sarin'ilay mpitsabo aretin-tsaina tsy manam-paharoa Franco Basaglia miaraka amin'ny fanohanan'ny mpandika Ada Scrignari.
Teo ihany koa i Roberto Mezzina, talen'ny departemantan'ny departemantan'ny fahasalamana ara-tsaina any Trieste sy ny mpisehatra roa, Pavel Berdon ary Giordano Vascotto ao amin'ny "Accademia della Follia".
Ny faharoa, indrindra indrindra dia nitantara ny zava-niainany fony izy hita fa nohidiana tao amin'ny hopitaly ara-tsaina tamin'ny mbola kely, talohan'ny fanavaozana ao Basaglia, fanavaozana izay nahafahany nanana fiainana normal ary nahita asa ivelan'ny hopitaly taloha.
Avy eo, nifindra nankany afovoan'i Trieste ity delegasiona ity mba hitsidika ny "toerana fahatsiarovana" izay misy plak fahatsiarovana tsirairay mampatsiahy ireo horohoro nataon'ny Nazi-pasista ary tao amin'ny kianjan'i Oberdan dia tsangambato iray izay fahatsiarovana ireo “sipa mifamono” roa lahy. Ho an'ny Nazia.
Tany amin'ny toerana maromaro dia namela satroboninahitra sy bouquets ny "mpivarotra".
Nifarana tamin'ny andro nihaona tamin'ireo namana Trieste nanomboka ny faha-2 martsa teo ny andro izay niarahan'ilay mpanentana tamin'ny volana martsa, Rafael de la Rubia, izay nitantara ny zava-niainany momba ireo firenena notsidihiny.
Farany, ny “Komity Danilo Dolci ho an'ny fandriampahalemana, firaisankina ary firaisankina” dia te-hanome fankasitrahana an'ireo mpanao fihetsiketsehana 5 niaraka tamin'ny sainam-pihavanana italiana italiana sy Slovenianina alohan'ny handehanany amin'ny dingana manaraka: Fiumicello-Villa Vicentina, tanàna iray 50 km miala an'i Trieste.
Fanoratana sy sary: ​​Davide Bertok